Itoophiyaaf Eertiraan waraana isaanii walitti makuuf akka jiran himame – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsItoophiyaaf Eertiraan waraana isaanii walitti makuuf akka jiran himame
Itoophiyaaf Eertiraan waraana isaanii walitti makuuf akka jiran himame
Ummanni Somaalee itti shidaa jira.
Keelloo: Bitootessa 29,2021
Itoophiyaa fi Eeritiiriyaan waraana isaanii walitti makuun federeeshinii waloo uumuuf akka jiran maddi odeeffannoo Ertiraa Hub jedhe kaleessa saaxilee jira.
Akka gabaasa kanaatti Eeritiiriyaan waraana ishee Tigraay keessaa baasuuf murteessite jedhee kan Abiy ibse dhara ta’uudha kan eerame.
Eeritiiriyaan abadan Tigraay keessaa hin baatu kan jedhu gabaasichi Wanti impaayerootni lamaan waliif galan, loltoonni Eeritiiriyaa kutaan waraanaa 12ffaa Tigraay keessa jiran waraana xoophiyaa/RIB’tti makamu. Humni waraana Eeritiiriyaa hafan kana hordofuun ajaja waraana Itoophiyaa jala galaa deemu jedhe gabaasichi
Loltoonni Eeritiiriyaa Tigraay keessa jiran marti atattamaan uffata seeraa isaanii baasanii kan waraana RIB akka uffatan walii galamuu isaa maddi odeessaa kun himeera.
Bakka bu’insa Abiyyiitiin Dr Abraam kan jedhamu ogeessa bobbaa waraana biyyoota lameenii kan hoogganu ta’a jedhame. Meeshaalee tekinooloojii fi saatelaayitii waraanaas isatu qindeessummaan sochoosa. Abraam lammii Eertiraa yoo ta’u dabalataan Eertiraa keessaa Birgaader Simoon Gabireding kan jedhamu bakka bu’ummaan waliin hojjechuuf muudamuu isaati kan eerame.
Biyyooti lameen kunneen federeeshinii waloo dhaabuuf yeroo dhiyootti marii ni eegalus jedha maddi odeessa keenya Eertiraa Hub. Adeemsi Itoophiyaan biyya ollaa ishee Eertiraa waliin dursummaa Abiyyi Ahemadiin taasisaa jirtu yaaddoo Kolonii jala galuuf deemti biyyattiin jedhu uumuu danda’eera.
Tibba kana Itoophiyaan waraanni Eertiraa naannoo Tigiraay keessaa akka bahan walii galtee irra geenyerra jechuun gabaasaa turan. Gabaasni bahe kun yaada sana kan faallessu ta’uu hubachiisa.
“No Withdrawal But a Change of Uniform”
THREAD: An agreement was made by @AbiyAhmedAli and @PAfwerki which called for the partial integration of #Eritrean forces into the #ENDF. Financed by #Ethiopia, it would also involve a change of Eritrean troops into Ethiopian uniforms. 1/4 pic.twitter.com/CzNu0wTQO5
— Yonas Nigussie (@Yonigussie) March 29, 2021
Ergaa Ariifachiisaa hordoftoota amantaa islaamummaa maraaf
Manni maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa walgahii kora taasifachaa jirutti PPn gufuu tahaa jiraachuu fi ammas filannoon amma gaggeeffamu fudhatama hin qabu, filannoo biyyoolessaa booda malee jechuun dhorkaa jiru. Hordoftootni amantichaa hunduu shira kana dura dhaabbachaa jira. PPn guutuutti kora amantaa kana fashaleessuuf masjiida gubsiisuuf karoora baastee jirti. Kanaanis jeequmsa uumtee koricha fashaleessuuf waan karoorsiteef hordoftootni amantichaa masjiida kee eeggadhu ergaan jettu waajjira aadde Mufaariyaat Kamiil keessaa nu geesse.
Oduu Hidha Abbayyaa
Hojjettootni hidha Abbayyaa sodaa nageenyaa irraa kan ka’e 3000 kan caalan hojii dhiisanii galuun beekame. Yeroo ammaa hojiin hidha Abbayyaa dhaabbatee jira. Oduun Itoophiyaan duumessaan saatalaayitii Egypt haguugde jettee Egypt himatte jedhu guutuun soba dha. Miidiyaalee fake fi Photoshop fayyadamuun iccitii isaanii kana dhokfachuuf olola oofamaa ture dha.
#Galatoomaa Galatoomaa Galatoomaa
Ani akka nama Oromoo tokkootti umrii keessan guutuu saba keessaniif jettanii umrii keessan guutuu saba Oromoof qabsaa’uu keessaniif galata guddaa isiniif galcha. Qabsaa’ota Oromoo kan saba Oromoof qabsaa’udhaaf bosona keessatti hadhaa qabsoon qabdu argan hundaaf galanni koo guddaadha.
Garuu qabsoon Oromoo galma gahee bakka tokkotti gaaddisa tokko jalatti isin arguu dhabuu kootif hedduu itti gadda. Namni isin tokkoomsu hin jiru. Tarii qabsoon Oromoo milkaa’ee gaaddisa tokko jalatti isin arguun rabbi osoo nu gammachiisee hawwa. Ani isiniin waa jedhee isin qeequn natti ulfaata. Tolchitanis balleessitanis saba keessaniif jettanii beeloftanii jirtu, dheebottanii jirtu, gammoojjii keessattj hiraarfamtanii jirtu. Waan hin taane hin qabdan. Galata nurraa dhabdanis rabbiin umrii dheertuu isin haa kaawu. Hangafoota qabsoo Oromoo hambaa gootota kaleessaa. Isintuu ija nu banachiise. Waan jedhu hin qabu.
Galatoomaa. Galatoomaa. Galatoomaa.
Qondaaltonni ABO lama-Lammii Beenyaa fi Daawwit Abdataa ukkaamfaman.
Lammilee Oromiyaa kunneen har’a manni murtii waliigala Oromiyaatti dhiyaatanii bilisa gadhiifamanis, poolisiin karra irratti qabee hidhe.
Qondaaltonni ABO kun gaaffii tokko malee gara mana isaaniitti akka galuu danda’an manni murtichaa murteessee ture.
Haata’utii, humnootni tikaa mootummaa mooraa mana murtii fuulduratti eeganii qabanii akka deeman beekameera.
Raashiyaan Itoophiyaa qaanessite!
Obbo Lammii Beenyaafi Daawit Abdataa dhaddacha irratti kallattiin akka hiikaman erga ta’ee booda, deebifamanii hidhaman.